Mustafe ma waxaan uga Fadhinaa inuu Heego Eryado mise inuu dadka samata bixiyo. | ogaden24
Mustafe ma waxaan uga Fadhinaa inuu Heego Eryado mise inuu dadka samata bixiyo.
Waxaan dadka baraha bulshada wax ku qora odhan lahaa waxaynu qoreyno inta aadan soo dhigin aynu iswaydiino qoraalkan muxuu bulshadeena dulman u tari karaa ? Muxuu u dhimi karaa ? Shaqsiyadaada saamaynta uu ku yeelan karo labada daaroodba?.
Intaa kadib aan ujeedkayga soo bandhigo aniga oo aaminsan waxayna akhristayaashu ogayn uma sheegisid
Waxaan wada ogsoonahay dhibaato soo jiraa ah oo inala factirsatey inay deegaankeenna iyo dadkiisaba haysato
Waxaan in badan keen inuu ogyahay aaminsanahay raadadka dhibtaa aan kor ku sheegay iyo xadhko na dabraya oo la doinaya inaynaan bulshooyinka caalamka la sinnaanin laynagu daray ( kala qaybsanaanta iyo qabiilka iwm ).
Marka xilliba waa xilliye kolba dad inaga mid ah way la yimaadeen dadaal badan in badanna naftooda kuwaaye laakiin caqabado ka baxsan gudaheenna yay u badnaayeen in ay halyayadaas gaadhi waayaan yoolkii bulshadu higsanaysey walow ay ku guuleysteen inaan illaa maanta ahaano bulsho leh diin muqaddas ah dhaqankii ay asalka u lahayd iyo inay shacabkeenu ahaadaan soomaali oo waliba bulshada inala wadaagta jinsiga soomaalinimo ahaan kuwa ku dhaggan ee uga daacadsan.
Haddaba iyadoo dhibkii sidii u jira maanta miyayna habboonayn GEELA WADHAF MA LAGU DAYAY arrintan ka gudo ballaadhan wax lagu soo koobi karo qoraal kooban oo face book lagu qorey kaliya in xusid baan uga jeedaa sidaas darteed markaan eegno dhibka ina haysa.
Wixii la soo marey iyo caqabadihii jirey in maanta fursad dahabi ah oo alle ogyahay kaliya inay dib noo soo mari inaan haysano bay iila muuqataa sidaas darteed ninka maanta alle qaddarey inuu hoggaan u noqdo shacabkerna waa mustafe siduu ku yimidna inaan eegno micne inooma samaynayso waayo inaguma cusba, kolba qof inaga mid ah oo Adiis ababa looga arko inuu Fulinayo danahooda inay inoo keenaan inaynaan iyaga iyo innaga isku danba ahayna isu sheegi mayno.
Balse su’aalaha inaan jawaab u Hello u baahan ayaa ah Mustafe maanta maxaynu uga fadhinaa ? Jidkee baan ka doonaynaa inaan qaadno ? tilmaantiisa uga fadhinaa? Ma xilalka iyo beelahaaa? Ma qandaraasyada iyo miisaaniyadda yayna dhicinbaa? Iyo waxyaabo la mid ah baa?.
Haddaba waxaas oo dhan ma ahee sidii aan uga bixi lahayn dhibkii soo jiraaga ahaa weeye inta uu kaalinta uu ka qaato mushkiladdan ma aha mid isagu uu soo afjari karo aragti ahaan laakiin xadhkihii nagu xidhnaa qaarkood inoo billaawe afleh ku jaro inta hadhayna kii jari lahaa sii diyaariyo waayo cid garan fursaddan inay sii socon alle unbaa garan si inta aan i fahmin ugu sharraxayaa.
1- siyaasad uu kula socon karo adiis oo qabow isagoon ujeedkiisa wixii ka leexinaya iska ilaalinaya la yimaado inta iyaguba hadda waxba uma dhadhawa e oo aad wax bahdil shacabka ula imaan maayaan oo marxaladii tigreega ee jabarti baan nahay bay kuwanina ku jiraan.
2- unuusan ku mashquulin dhibaatooyinka dhaxdernna ah ee ay qoladaasi na dhaxkeeneen ee uu abuuro koox kooban tiro ahaan oo lagu xuhay dariiqa saxda ah ee lagu higsanayo yoolka inay naftoida iyo maalba u hurayaan lagana leexin karin dariiqa saxda ah una bisil siyaasadda qoladan hadda adis ababa ka talisa, waan in shaqada ugu badan ee xilligan lagaliyaa Abaabulka iyo Jihaynta shacabkeena.
Tusaale waxaa idiinku filan kooxda hadda doonaysa inay noo soo xidhaan mask waa EPRDF oo qowmiyad khaas ah matasha mustafe ha daraaseeyo sideybeey kuwii iyaga ku eedaganaya iyagoo ay aaminsanaayeen inay wadnahooda jib inay ku xidheen soo gudbiya sirtooda uga siibteen inagoo ogsoon inta jeer ee ay ku fashilmeen sidey tigreega meesha uga saari lahaayeen , waxna ha ku qaato dadkii qoriga inay ku xalliyaan mushkiladdan doonayay meeshay ku danbeeyeen.
Mustafe niyadda haku hayo hadduu lumiyo fursaddan shacbkana waqtiga ka lumiyo inaysan cafiyi doonin af macaan shacbkeena shacabkeena kaagama baahna ceel iyo barkad laqadana uma baahna waqtiguna wuu socda bulshada waxgaradkeeda waxay eegayaan minitka saacadda shalay maanta ma aha xilligii junfo laysku xeeri jirey ee qabiil dhan wada lataliye ahaa ma aha xilligii sidii kursiga fadjigiisa sheerayso ma aha.
Xilli gudunta geedka lagu jarayay lagu mashquulo ma ahee waa xilligii yaa gudunta daabkeeda yahay weeye
Bisadda haddaad gadaasheeda dhagax ku tuurto jiir bay moodaa hebel waa danbiile ama waa heego inaad ku mashquusho yaaba kaa filayay dadkan aad ku mashquushay waa dadkaagii waxaad ku eedeena waxaa usoo dhiibay miyay kaa qarsoon tahay? Isbadallada itoobiya ka dhacaya saamaynta ay inagu nagu yeelanayso la mid ma aha qowmiyadaha kale.
Aragtidayda dhinaca khaldan qofkii u arka waxaan ka codsan way bir goynin waana mushkilad xal u helistiisa ina wada faran ee ha igu qanciyo waddo kale ee ninkaas maanta inagu jiheeyo
Bye: Cabdinuur maxamed sooyaan